ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၁၀)
ဒီအကြောင်းလေးက အရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာ. ကျွန်တော်ပြောသမျှအကြောင်းအရာအများစုတို့သည် ရှင်နန္ဒာနာမည်နဲ့ ဘုန်းကြီး ကနေ ယနေ့ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာဖြစ်လာသော ဆရာမှ ပြသထားသော ပို့စ်များကို ကူးချခြင်းဖြစ်ပါတယ်.... ဒီဆရာကတော့ စတင်တိုက်ခိုက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ သူတပါးဘာသာအား ရစရာမရှိ သူတပါးကိုးကွယ်နေသော ဘုရားအား အထင်သေးအမြင်သေးလာအောင် တဘက်စောင်းနင်း လုပ်ကြံလီစယ် ပြီး စာအုပ်များ ဖြန့်ချီကာ ဗုဒ္ဓဘာသာတည်တံဖို့ ကြိုးစားနေသော မိစ္ဆာဘုန်းကြီးများအား ပြန်ှလှန်ဖြေကြားခြင်းနှင့် ဗုဒ္ဓ၀င်(သိုင်းဝတ္တူ)တို့မှာ မှားယွင်းသော အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနေသော ဆရာ ဖြစ်ပါတယ်...... သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ သူတို့ကျမ်းကို ဖတ်တတ်ဖို့ ကျွန်တော်က ကုလားစာ(ပါဌိစကား) ကိုသင်ရအုံးမယ်. ...ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူ ဒီဆရာ(ပုဂ္ဂိုလ်)၏ ပို့စ်များကို ကူးချခဲ့ပါတယ်...... ကျွန်တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မိတ်ဆွေတို့ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ရုပ်ထုဆင်းတုကိုးကွယ်မူကို အလွန်ပင် ရွံရှာ မုန်းတီးပါတယ်...... ဟိုကမ္ဘာပေါ်ဦးအစကနေ ယနေ့ထိခရစ်ယာန်ကော မွတ်စလင်ကော တူညီစွာလက်ခံထားကြသည်မှာ ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်သောသူဟာ လူထုံလူအ အသိဥာဏ်မရှိသောသူများ၏ လုပ်ရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်းကို သွန်သင်ခဲ့ကြပါတယ်..... သူတို့၏ဘုရားသည် နှုတ်ရှိသောလည်း စကားမပြောတတ် နားရှိသောလည်း မကြားတတ် တဲ့ ကြည့်ပါအုံးဗျာ အရုပ်ကြီး ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ လူလူချင်းကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုလည်း သိပ္ပံပညာရှင်များကိုပဲ ကိုးကွယ်ကြပါလို့ ဘာလို့လည်းဆို သူတို့ တီထွင်ထားတဲ့ စက်ရုပ်များကတောင် စကားပြောတတ်သေးတယ် လမ်းလျှောက်တတ်သေးတယ်......
အခုကတော့ လူအရိုးအကြောင်း ကို ပြောဆိုထားတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်းက အကြောင်းကို ဆက်ကြရအောင်ဗျာ.....
ဂေါတမသည် လူဖြစ်သောလည်း လူတို့ကဲ့သို့ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံ မတူပါတဲ့။ ရိုးရှင်းစွာ ဆိုရပါက အရိုးတို့သည် ကွင်းဆက်များဖြစ်သည်ဟူ၏။ အကယ်၍ ဝေသာလီပြည်ကို ကြည့်လိုပါက လည်ပင်းလှည့်၍ ကြည်မရပါ သောကြောင့် ဆင်ကဲ့သို့ တကိုယ်လုံး လှည့်ကြည့်ရပေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုဝေသာလီပြည်ကသာ မဟာပထ၀ီမြေကြီးက အိုးထိန်းစက်သဖွယ် လှည့်ပေးခြင်းဖြင့် ဂေါတမရှေ့တော်သို့ ရောက်ရပေတော့သည်ဟူ၍ ဆိုထားလေ၏။ ဤသို့ဆိုက ဝေသာလီပြည်ကြီး လှည့်နေချိန်တွင် ဂေါတမသည် အဘယ်အရာပေါ်တွင် ရပ်နေပါသနည်း ဟားဟား( အကြောင်းမှာ ဂေါတာမသည် မြေကြီးနှင့် အတူမလယ်သွားသောကြောင့်ပါ) ။
ခန္ဓာဖွဲစည်းပုံက လူတို့နှင့် မတူတဲ့ တော်သေးတာပေါ့ နှဖူးမှာ (----) မပေါက်လို့
အကြောင်းရှာတော့ ခေါင်းမှာ ချာချာလည် ဟားဟား ကျွန်တော်သေချာပြောနိူင်တာက ဂေါတာမအသက်ရှင်ကာလမှ လူတွေ ခေါင်းမူးပြီး သေကြမှာ အမှန်ပါ...
သူက ဟိုပြည်ကို ကြည့်ချင်းလို့ ကမ္ဘာမြေကြီးက တခါလည်ပေးရ ဒီပြည်ကို တခါကြည့်ချင်လို့ ကမ္ဘာမြေကြီးက တခါလည်ပေးရနဲ့ မြေကြီးပေါ်မှာ နေထိုင်ကြသော လူတွေကတော့ ဂေါတာမအား ကိုးကွယ်ကြမလား ဖေတွေအမေတွေနဲ့ ကိုင်းတုတ်ဆဲဆိုကြမလားဆိုတာ စာဖတ်သူပရိသတ်များပဲ... စဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာ....
မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်နှင့် အဌကထာ တွေအရဆိုရပါက အကျဉ်းမှတ်ရန်မှာ။
၁။ ဘုရားရှင်တို့၏ အရိုးတော်တိုကား ကွင်းဆက်။
၂။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတို့၏ အရိုးတော်တို့ကား ချွန်းချိန်။
၃။ ရဟန္တာတွေနှင့် လူအားလုံးတွေရဲ့ အရိုးတွေကတော့ တေ့ဆက်များဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာ။
ကွင်းဆက်တွေ တေ့ဆက်တွေတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ဂေါတာမကိုယ်တိုင် ခဲလွတ်နေတဲ့ မထိတချက်ထိတချက်ဖြစ်နေတဲ့ အရူးလိုပဲ ပြောပါရစေဗျာ၊ အရိုးတောင်မှ တေ့ဆက် ကွင်းဆက်တွေ ရှိရသေးတယ်နော် ဒီလိုကျွန်တော်ပြောမိလို့ မင်းတို့လို့ ကောင်တွေက ဘာသိမှာလဲလို့ ဆိုအုံးမယ်. ..ကျွန်တော်မသိဘူးဟု ဘဲထားပါ. .. သိပ္ပံပညာရှင်များအား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ အရိုးများ ဒဿနာစာအုပ်များ ဖတ်ရပါက အူတတ်အောင် ရယ်ကြမှာ အမှန်ပါ...
သာမန်လူထဲက ကျင့်လို့ဘုရားဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုကြသော သူများအတွက် ဤအရာများအား အဘယ့်ကြောင့် ဆေးပညာအရ၊ လက်တွေ့ကျမကျ မစဉ်းစားမိပေကြလေရော့သလားဆိုတာ ကျွန်တော် မစဉ်းစားတတ်တော့ပါ။
ဒီလိုထူးခြားချက်တွေကြောင့်လည်း ဂေါတမက ပကတိဆင်တို့ရဲ့ ကုဋေတစ်ထောင် ပဏာမ အားနဲ့ညီမျသော အားတော်ရှိတယ်လို့ဆိုကြလေရဲ့။ ဂေါတာမရဲ့ အင်အားက ပကတိဆင်၇ဲ့ ကုဋေတစ်ထောင် ပဏာမ နဲ့ ညီပါတယ်တဲ့ ဒါဆိုရင်တော့ အနှစ်(၁၀၀) အတွင်းအားထက်တော့ သာလွန်မှာပေါ့နော်...
မိတ်ဆွေတို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ.... ဆင်တကောင်ရဲ့ အင်အားတောင် အရမ်းအားကောင်းတာ ကုဋေတစ်ထောင် ဆိုတော့ ဖြစ်လည်း ဖြစ်နိူင်ပါတယ်လေ ဒါကြောင့် မယားငါးယောက်နဲ့ မောင်းမံမိဿံ ငါးထောင်နဲ့တောင် ပေါင်းသင်းနေထိုင်နိူင်သေးတာပဲ....
Posted by messenger at 11:17 PM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဖြစ်နိုင်လား